Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate (Ndeupi Wins?)
Chii chinonzi Trenbolone enanthate? Uye kuti inoshanda sei?
Trenbolone enanthate (10161-35-8) uye Trenbolone acetate (10161-34-9) iviri yeanowanzoshandiswa vanabolic androgenic steroids. Iyo Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate migumisiro inenge yakafanana. Kusiyana kunouya nenguva iyo imwe neimwe inotora kuti isunungure tsvina yeTrenbolone.
Kunyange zvazvo ichitaura nenzira imwecheteyo, Trenbolone Enanthate uye Trenbolone Acetate inoshanda zvakasiyana. Trenbolone enanthate imishonga iyo inowanzoshandiswa pakuzadza kubhadhara nemuti. Icho chiri chekirasi ye androgenic anabolic steroids iyo inozivikanwa seTrenbolone. Steroid yakafanana neimwe hormone inonzi Parabolan.
Kazhinji, iyi hormone inoumbwa neTrenbolone base iyo iyo esanthate ester inowanikwa. Kunyange zvazvo vanhu vakawanda vachida kuisa Trenbolone Acetate muboka rimwechete rechiremba chechirwere chemhuka seTrenbolone enanthate, hapana humwe uchapupu hunotsigira. Ichi ndechokuti Trenbolone enanthate is steroid isingasunungurwi muzvitoro. Vaya vanoshandisa steroid vanoda kuitenga mumusika mutengo sezvo kushandiswa kwayo kusingabvumirwi nemutemo.
Nguva yokutanga iyo Trenbolone enanthate (10161-35-8) yaitengeswa yaiva mu2004. Iyo chete inogadzira mushonga panguva iyoyo yainzi British Dragon, uye chigadzirwa chacho chainzi Trenabol. Sezvakamboti, kune mamwe maviri maTrenbolone steroid maronda mumusika.
Pakati pematatu matatu, trenbolone enanthate inogona kuonekwa seyekupedzisira kupinda mumusika. Zvimwe zvinokonzerwa nematambudziko zviriwo zvepamutemo, asi Trenbolone enanthate haisi pamutemo kune dzimwe nyika munyika.
Imwe Trenbolone anabolic androgenic steroid inosanganisira Trenbolone Acetate uye Parabolan. Trenbolone Acetate yakabvumirwa sezvo yakaratidzwa kuva chinhu chinobatsira mumashandisirwo ekurapa kwevanhu. Zvisinei, pasinei nekushandiswa uku kunokosha, mushonga uyu wakawanikwa unonyanya kukoshesa mubasa revet kupfuura basa revanhu.
Parabolan, kune rumwe rutivi, akanga ane simba kune dzimwe mbiri dzeTrenbolone steroid mukuti ndiyo chete mishonga yakange yakagadzirirwa nenzira yekushandiswa kwevanhu. Ichi chakaita sarudzo yakakosha yevakawanda vomuviri kusvikira kushandiswa kwayo kuchibviswa mu 1997.
Trenbolone enanthate inoratidza mhando dzose dzeimwe steroid. I-anabolic steroid yakave yakasiyana neTrenbolone acetate mukuti inofanira kushandiswa zvishoma pane iyo yekupedzisira. Chii chakaoma kuvakadzi vemiti ndeyekuti kutenga e, iwe unofanirwa kutarisana nematambudziko ekutsvaga mumusika.
Izvi zvinoreva kuti iwe ungangodaro uiwana mumatare akasiyana akasaisanangurwa semugumisiro wokuva nekutonga kwepamutemo. Kune rumwe rutivi, Trenbolone acetate inowanikwa zvikuru kubva kune vanozivikanwa vatengesi ve steroids.
Sangano, Trenbolone enanthate inogona kurondedzerwa se-19-nortestosterone rudzi rwevanabolic steroid. Iyo 19 iri muchitarisiko inotsanangura kuti hormone haina carbon atom pane 19th nzvimbo. Imwe hormone inoshandiswa pakuvaka muviri inotsanangurwawo zvakafanana Nandrolone iyo ndeimwe yezvakakosha zvikamu zvevakakurumbira Deca Durabolin.
Zvose mahomoni eTrenbolone akafanana naNandrolone maererano nehutano hwavo. Izvi zvinoreva kuti anenge ose anabolic steroid akafanana muzvigadziro zvavo.
Chengetedza kuchinja mukugadzirwa kwavo ndizvo zvinounza musiyano mumabasa. Muenzaniso wakanakisisa ndeye weTrenbolone hormone.
Kuchinja hormone yaNandrolone nokuwedzera zvibatanidzo zviviri pa 9th uye 11th mafomu marefu Trenbolone. Iyi kuchinja kunounza musiyano mubasa reTronbolone hormone. Iyo inoratidza zvishoma nezvishoma metabolism kupfuura Nandrolone, yakashamwaridzana yakanyanya kufanana neyakagadzirwa ne-androgen pane yakagadzirwa kwepakutanga uye inodzivisa kuumbwa kwemakwenzi anonhuhwirira. Izvi zvinogona kutarisa zvishoma, asi zvinouya nehomoni inopfuura yakanyanya kupfuura Nandrolone hormone. The Ultimate Guide kwa Dihydroboldenone / DHB yeMuviri wekuvaka
Zvose zvinokonzerwa nematokisi anozivikanwa kuva neanabolic yakakura kune androgenic rating chiyero. Zvose izvi steroid sine an analiclic rating ye 500 uye yakadaro uyerogenic rating. Nezvehutano, hormone inounza migumisiro yakafanana. Izvi zvinoreva kuti zvinokonzera zvakajeka kutumidzwa anabolic pamwe nea androgenic madhara.
Sezvo mishonga yose yakafanana yakafanana neyekugadzirwa kwekutanga, chii chinounza kusiyana kwemaitiro ekushanda ndiyo ester yakabatanidzwa. MuTrenbolone enanthate, ester inosvibisa basa rayo ndiyo enanthic acid compound.
Iyi enanthate ester haina kuita kuti Trenbolone steroid inobvunzurudzwa zvakanyanya kudarika imwe yevana anabolic androgenic steroids mumhuri iyi. Pane kudaro, ester inokanganisa chiyero iyo steroid inoshandisa mushure mokutumira kwayo kumuviri wemuviri wemuviri.
Pakufananidza Trenbolone enanthate vs Trenbolone acetate, zvinotevera zvinhu hunooneka:
Iyo yekare yakasunungurwa zvishoma nezvishoma pane iyo yakazotevera. Izvi zvinokonzerwa nekukanganiswa kweeanthate ester.
Iyo enanthate ester inewo zvakakosha pakugadzirisa simba re concentrate steroid. Sezvo inyenyeredzi yakawanda inotora huwandu huzhinji muhutano, zvinotevera kuti e e isina simba kupfuura. Trenbolone acetate ine ester duku uye naizvozvo inobata nzvimbo shoma kana ichienzaniswa nesanthate ester.
Pasinei nekusiyana kwekumhanya kwekusunungurwa kwemhomoni yeTrenbolone, muyero unogona kudzora kuti uwane zvinodiwa. Paunenge uchienzanisa e e vs. yekuvaka muviri kana uchifungisisa fomu yeParabolan, tafura inotevera inoratidza kukosha kweTrenbolone inoshandiswa iyo iripo mune imwe nhamba.
Nzvimbo yeTrenbolone Compound Dosage (mg) Kushanda Trenbolone munharaunda
Trenbolone Enathate 100 mg 72 mg yega yega 100 mg yemuumbi
Trenbolone Acetate 100 mg 87 mg yega yega 100 mg yemuumbi
Parabolan (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate) 76mg 50mg yega yega 76.5 mg yemuumbi
Chinokosha ndechokuti iyo Parabolan hormone inowanikwa muyero yakasiyana ye76.5mg, kusiyana nezvimwe zvinowanzovapo mu 50-100mg per ml yeTrenbolone Acetate uye 100-200mg per ml yeInanthate compound.
Zvinorehwa neTrenbolone enanthate hormone kune vanovaka muviri havagoni kupererwa. Iyo kemikari inozivikanwa kuti inounze anabolic steroid imiti iyo yakanyanya kukunda kune dzimwe dzakawanda dzakanyanya kunzi vanabolic steroids. Izvi zvinokonzera kuti hormone iripo mupfu kuti ive chinhu chinonyanya kukosha chokuunza chidiro chaunoda kumunhu. Hemoni inoshanda nekuunza migumisiro yakasiyana mumuviri. Mimwe yemigumisiro iyi inosanganisira zvinotevera:
1) Inowedzera protein synthesis
Tsvina inonyanya kugadzirwa nemapuroteni. Kune zvimwe zvikamu zvinoumba mhuka dzemhuka, asi kuvapo kwepuroteni kunokosha zvikuru pakuvaka maviri. Kuti kuwedzere kugona kwemuviri, mapuroteni anofanira kunge aripo.
Aya mapuroteni akavakwa mumasero, uye kana nzira yekushandura yakakurumidza, zvakawanda zvinowanikwa kushandiswa. Trenbolone enanthate inowedzera nzira iyo mapuroteni anogadzirwa nawo mumuviri.
Mhedziso iyi ndiyo kusikwa kwemhepo inobatsira vanabolic basa uye izvi, zvakare, zvinoshandura pakuvandudza kupora mushure mekudzidzira.
Izvo zvinowedzera mapuroteni mumuviri zvinobatsirawo panguva iyo munhu anotsvaka kuderedza uremu. Izvi zvinogadzirisa chikamu steroid inobudirira iyo inoshandiswa panguva yekucheka pamwe chete nekugadzirisa.
2) Kunobatsira kuchengetedza nitrogen mumatumbu
Basa re nitrojeni mumasimba ekugadzirisa inokosha. Panenge ne16% yemasumbu emuviri anoumbwa ne nitrogen, uye kune chido chekuchengeta mazinga echinhu ichi pane imwe nzvimbo yakanakisisa.
Kurasikirwa kana kuderera kwe nitrogen mumuviri wemumuviri kazhinji kunotungamirira pakusikwa kwenzvimbo yakakosha isina kukodzera kuvaka muviri.
Kuti urambe uri vanabolic uye unokohwa zvigaro zvehurumende iyi inosanganisira kupora nokukurumidza uye yakanaka muscle buildup progress, mumwe anofanirwa kuve nechokwadi kuti mazinga e nitrogen haanzwi pasi pemitemo inodiwa. Trenbolone enanthate ndiyo chinhu chinokosha pakuita izvi. The Ultimate Guide to Methyltestosterone for Bodybuilding
3) Kunobatsira kugadzirwa kwemashoko matsvuku eucocytes
Oxygen ndiyo gasi ndiyo inokosha yekushanda kwechizhinji chemuviri wenyama. Iyi gesi inotakurwa nemasero matsvuku eropa ayo aripo muropa. Kushandiswa kweTrenbolone enanthate kunounza kuwedzera kwekugadzirwa kwezvikamu zvinokosha zveropa.
Kana mazinga acho akakwana, pane kukwana kwakakwana kwe okisijeni kumasumbu uye mamwe maviri masimba anobatanidzwa pakuvaka muviri. Izvi zvakakwirira zvinotungamirira kukurumidza kupora mushure mekudzidzira. Kana ropa rakanyatsokonzerwa nemhepo, pane zvakare kuwedzerwa kutsungirira, uye izvi ndizvo zvinokosha pakuzadzika nekucheka.
Nokudaro, tarisira kuva nekuvandudzwa kwe okisijeni mushure mekushandiswa kweiyi anabolic steroid, uye izvi zvichave zvakakosha chero chinangwa chekushandira kwako chinenge chichida kuitika.
4) Inovandudza iyo IGF-1 yakabuda
Kushandisa Trenbolone enanthate kunofanirwa kuunza kuvandudza pane zvose vanabolic zviratidzo mumuviri. Chiropa chechikara chinokonzera hormone ine simba inonzi IGF-1 iyo inokosha pakuunza kuenzanisa muzvinhu zvakakosha anabolic mumuviri.
Mukati neHuman Growth Hormone (HGH), IGF-1 inokosha pakubatsira kugadzirisa muviri. Kuvapo kwemahomoni maviri ari muropa kunovandudza chimiro chevanabolic, uye izvi zvakakosha pakupa muviri muviri unofanirwa kunzwa.
Iyo hormone IGF-1 inonyanya kukosha munenge maitiro ese emitemo, uye nokudaro kugadziriswa kwayo pahutano hwakakosha zvakakosha pakuunza kuenzanisa mukushanda kweshengo.
5) Kunoderedza basa reGlucocorticoids
Glucocorticoids mahomoni aripo mumuviri kubatsira rubatsiro rwemafuta. Izvi zvinoreva kuti ivo vane chikanganiso chisina kunaka pakusikwa kwemisungo yemuviri. Kunyange zvazvo mahomoni ari akakosha, kuvapo kwavo kwakakwirira kunokuvadza. Icho chinotyisa chinonyanya kutaurwa kune vanhu vanoita zvakadzidziswa kudzidzisa uye kudya kunorema kudarika avo vasingaiti. Kuunza migumisiro yavo, kugadzirisa maitiro, Trenbolone enanthate ikadhi. Iyo hormone inonyanya kudzivisa basa re glucocorticoids uye nekudaro kuve nechokwadi kuti inoda vanabolic atmosphere inogadziriswa. Izvi zvine utano hwemisumbu yekuvakisa uye kupisa kwemafuta emuviri.
6) Inovandudza kusungirwa kune androgen receptor
Mazhinji evanhu vanowanzoshandiswa vanabolic androgenic steroid anozivikanwa kuti awedzere kuwedzera kwemaitiro esero metabolism. Trenbolone enanthate imwe yevanabolic steroid inounza izvi. Uyezve, steroid inotsigira zvakasimba kune androgen receptor.
Izvi zvinokonzera kuvandudzwa mune zvakananga kunyora maitiro zvinosanganisira kutendeuka kwemafuta mumuviri kumasimba. Izvo zvinoita kuti kushandiswa kweTrenbolone enanthate kunokosha zvikuru kune vadzidzisi vemiti, kunyanya panguva dzisina nguva-yemwaka. Munguva yekucheka, kukosha kwei hormone hakugone kusimbiswa.
7) Inovimbisa kutendeuka kwakanaka kwezvokudya zvinopedzwa
Iko kune zvisingaverengeki zvinobatsira zvinouya semubairo wekushandisa iyi anabolic androgenic steroid. Zvisinei, pane zvose zvakanyorwa pamusoro apa, hapana munhu anokosha sezvo kukwanisa kweTrenbolone kunobatsira kuvandudza kudya nekushandisa zvinobudirira.
Zvokudya zvose zvinopedzwa nemuiti wekugadzira muviri zvakakosha pakusimbisa muviri. Ichi chikafu, zvisinei, chinogona kuva chisina maturo kana chisina kutendeuka zvakakwana kune fomu inodiwa. Kushandiswa kweTrenbolone enanthate kunovimbisa kuti zvokudya zvose zvinopedzwa zvinoshandurwa zvichienderana nemhando dzakakosha.
Pasina hormone yakadaro, chero chikafu chinopedzwa chichashandiswa zvishoma. Iyo hormone inovimbisa kuti kukosha kwekudya kwezvokudya zvose zviri kumusoro. Ndicho chikonzero chekuti Trenbolone hormone inopiwa kune zvipfuwo nguva isina kuurayiwa. Izvi zvinoreva kuvaka nyama kuburikidza nekuvimbisa kuti mishonga inoshandiswa zvakakodzera, uye izvi zvinoita kuti kuwedzerwa kuwanda kwemhuka.
Chii chinonzi Trenbolone acetate? Uye kuti inoshanda sei?
Trenbolone acetate (10161-34-9) inonzi steroid anabolic iyo ndeye yepamusoro-soro inowanikwa ne bodybuilders. Iyi hormone inowanika zviri nyore, uye inopa mhando dzakasiyana dzezvikonzero zvichienderana nenguva uye chiyero chinotorwa. Nhema dzakawanda dzine chokuita nekushanda kwayo dziriko, asi chokwadi chechokwadi ndechokuti kana chinoshandiswa zvakakodzera, chinogona kuuya nemigumisiro yakanakisisa pamusoro pekucheka nekudzikisa.
Iyi anabolic androgenic steroid inowanzo chiremba wezviremba zvechiremba. Chii chakakonzera ichi chikamu ndechekuti hormone yainyanya kushandiswa kuguta kwemhuka dzaive kuswedera kuzera rekuuraya.
Tren mupfu ndeyeboka reTrenbolone zvinodhaka. Iyo hormone yeTrenbolone yakagadzirwa munguva yekupedzisira ye1960s. IAcetate hormone yakazobatanidzwa pamwe nekugadzira Trenbolone acetate uye chigadzirwa chakatengeswa pasi pezita rinonzi Finajet, uye mune dzimwe nguva Finaject. Gare gare, mushure mekugadzirwa kwemwe, imwe mishonga yeTrenbolone inonzi Parabolan yakaitwa neNegma Laboratories. Iyo mishonga miviri yakanga yakafanana asi yakasiyana zvakasiyana nemhando yeester yakanamatirwa neTrenbolone base. MuParabolan, ester Hexahydrobenzylcarbonate ester yakakura kudarika mune a.
Imwe nyanzvi inogadzira Trenbolone acetate yakagadzirwa yainzi Hoechst-Roussel. Imwe iyo yakagadzira steroid kusvikira pakupedzisira kwe80 apo pavanomisa kugadzirwa kwechiremba wezvokurapa kushandisa madhiragi. Munguva iyi apo kugadzirwa kwakamira, kambani yakaunza Finaplix pellets.
Iyo pellets yaifanirwa kuiswa mukati memutsara wezvipfuwo, uye yakagadzirwa neTrenbolone acetate.
Chinangwa chacho chaiva chokuvandudza nyama yakakosha yakagadzirwa mumombe, uye yakashandiswa nguva pfupi musati mhuka yaurayiwa. Kushandiswa kwavo kwezvinangwa izvi zvakaramba zvichiramba zvichienderana nevakaonekwa kuti zvakakosha pakuvandudza hutano hwemhuka.
Mushure mokubudirira mumisumbu yakakosha temazi buildup mumhuka, varimi venyama vakaona kubudirira kweFinaplix pellets uye vakazvitenga kuti vashandise mukuvaka muviri. Iyo pellets yakaitwa mumvura inoshandiswa iyo yakanyatsoratidzwa muropa remutambi. Vanhu vakawanda kusvika pakusangana vanoramba vachishandisa Finaplix pellets kuti vabudirire kusimba nekucheka.
Zvisinei, nekufamba kwenguva, makambani akawanda akashandisa injectable Trenbolone acetate inogona kushandiswa zvakananga pasina kudiwa kwekutendeuka. Kushandiswa kwei hormone pakati pevashandi vanosimudzira vatambi kunonyanya kukoshesa, uye inowanzofungidzirwa kuti ndiyo inowanzoshandiswa steroid kunze kwezvinhu zvinonzi testosterone zvinonyanya kukwirira mumutsara.
Zvinobatsiro zveyi anabolic steroid hazvina kufanana. Kushandiswa kwevamwe steroid panguva imwechete hakugoni kubudisa zvakasvibiswa zvakashata kune izvo steroid inopa kumushandisi.
Zvinobatsira izvo munhu akagadzirirwa kukohwa mushure mekushandiswa kweSteroid zvinosanganisira kupiwa kwemasimba makuru panguva yekushushikana. Kuwedzera mune simba remisungo inofambisa izvi.
Iyo hormone yakafanana neTrenbolone enanthate muzvinhu zvakawanda zvakadai sokutakura kwavo zvakaenzana nevanabolic uye uyerogenic ye 500. Asi hormone, zvisinei, inopesana pakuti ine shoma shoma ester uye izvi zvinoshandiswa kuti zvive nehuwandu hwehutachiwana muropa.
Kunyange zvazvo e eine hafu yenguva-hupenyu, yekuti kune imwe pfupi yeupenyu hwemazuva maviri. Izvi zvinoreva kuti shure kwemazuva maviri, migumisiro yekushandiswa kwehomoni ichava yakakura. Imwe kufanana pakati pemadziro maviri eTrenbolone ndeyekuti zvose zviri zviviri zvinobereka zvibereko zvakafanana.
Zvisinei, chii chinoisa Trenbolone acetate zvakasiyana ndiyo inokurumidza kukurumidza iyo iyo hormone inotakura mabasa ayo. Izvi zvinoreva kuti mabasa akadai seaya anotevera achawanikwa kubudirira kwekutsvaga:
Kuwedzera kwehuwandu hwepuroteni inobatsira kubatsira mukuvandudza vanabolism
Inovandudza kuitora kwe nitrogen mumuviri. Izvi zvinounza nekugadzirwa kwenharaunda yevanabolic iyo inokosha pakucheka kwemafuta uye kubvongodza kwemisungo.
Inovandudza basa reIndulin-Sekukura Chiitiko-1. Iyi hormone inoberekwa nechiropa inokosha mukutonga kwezvinenge zvose maitiro emutumbi. Zvekukosha mukugadzirwa kwemuviri ndiko kuve nekufambisa kwekutsvaga kwekurumidza uye yekuvandudzwa kwehutano hwemuviri. Tren a imwe yehomoni shomanana ine simba guru pamabasa ehomoni iyi
Iyo hormone inokoshawo mukuchengetedzwa kwemasero matsvuku eropa ayo anotarisira kutakura okisijeni. Mugumisiro unovandudzwa kutsungirira muviri wemuviri kuti uite zvidzidzo uye uvandudze kupora.
Iyo hormone inokurudzira kubviswa kwehomoni dzinoshungurudza. Aya mahomoni anozivikanwa kuti anokonzera mhepo yakasvibirira iyo inokurudzira kuparadzwa kwemisungo pamwe nekusimudzira kuwedzera kwemafuta emuviri. Trenbolone acetate inovimbisa kuti idzi mahomoni anodiwa kumitumbi yedu inoramba iri pamatambudziko anokwanisa. Kana paine huwandu hwepamusoro, iyi ndiyo apo pane kuwedzerwa mumagadzirirwo emagetsi asina kuve nehutano hwekushanda kukurudzira vatambi.
Imwe iyo inokosha inoshandiswa iyo inoshandiswa nekushandiswa kweTrenbolone enanthate ndiyo inosungirirwa kune receptor androgen. Kana izvi zvikaitika, chiyero chekuparara kwemafuta kunosimbiswa zvikuru uye inobvumira kuti mafuta emuviri arambe akaderera kumazinga akaderera anodiwa.
Pakupedzisira, kushandiswa kweTrenbolone enanthate kunounza kuvandudza kushandiswa kwemishonga inoshandiswa. Iyo hormone inovimbisa kuti zvokudya zvinopedzwa zvinoshandiswa zvakanyanya kushandiswa kuburikidza nekuvandudza chiyero apo mutumbi unoshandura icho kune mamwe maitiro. Nekuvandudzwa kwekutendeuka, pachava nekuwedzera mukuwanda uye kwenguva yakareba, uye munhu wacho achava nechimiro chakanaka chakaumbwa muviri.
Tren e vs Tren inotengeswa
Iwe uchaona zviri nyore kutenga zvinopfuura e e. Zvisinei, iwe unogona kuwana huri e / tora wekugadzirisa uyo anowedzera seesitoresi kana kutengesa. Chikonzero nei hormone Trenbolone enanthate isiri nyore kuwana ndeyokuti steroid haisi pamutemo.
Saka kutengeswa kwayo kwakarambidzwa munzvimbo dzakawanda pasi rose. Zvisinei, iwe unogona buy e e online kunyange izvi zvinokubhadhara zvakawanda pane kutenga imwe. Kana iwe uchida kutenga e e online kana kungoenda kune buyaas.com nokuda kwechirwere chechokwadi. Iwe unogona zvakare buy online online kubva panzvimbo.
Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate for Cutting
Kucheka kunosanganisira kuderedza mafuta mumuviri uye kuchinja mazhinji ekutendesa misumbu. Vatambi vakawanda, zvikuru avo avo vanodya zvokudya zvakasimba zvikuru vanogona kuwedzera mafuta akawanda mumitumbi yavo.
Aya mafuta angangodaro anokanganisa kubudirira kwavo mumakwikwi, uye izvi zvinoda kudiwa kwekudzikisa. Trenbolone steroids ndiyo imwe yenzira dzakanakisisa dzekuvimbisa kuti muviri wemafuta unochengetedzwa, uye zvigone kuonekwa munguva shoma.
Itero steroid inobudirira chaizvo panguva yekucheka kwemwaka apo mutambi wacho asingakwikwi. Chinonyanya kukosha chekushandisa Trenbolone yekucheka ndechokuti steroid inopa chikonzero chakakosha nenzira yakachena. Kusiyana nemamwe akawanda steroid mumusika, Trenbolone hormone haina kukurudzira mvura kuchengetedza. Izvi zvakakosha zvikuru sezvo kuchengetwa kwemvura kunozivikanwa kunokonzera zvinetso zvakadai sokukwirira kweropa kumunhu. Hemoni inodzivisawo kuumbwa kwamafuta.
Zvisinei, kunyange zvazvo Trenbolone steroid inobatana pakukosha panguva yekucheka, izvi hazvirevi kudya kusinganzwisisiki. Zvinokurudzirwa kushanda kukurudzira vatambi kuti vatore zvokudya zvinonzi vanove noutano hwakanaka.
Kunyanya kudya mafuta zvakanyanya hazvikurudzirwi pane zvose zvavanenge vachizopedzisira vachipa kupa muviri kutarisa kusina kunaka pasinei nekushandiswa kweTrenbolone steroids. Pakuenzanisa e e vs a for cutting, kusiyana kwacho hakuna kusiyanisa sezvo steroid yose inobatanidza izvozvi zvinoshandiswa.
Trenbolone enanthate yekucheka
Kunyange zvazvo Trenbolone Enanthate isinganyatsobudiriri pakucheka seTrenbolone acetate, ichiri kukosha pakuvimbisa kuti mafuta emuviri anounzwa kusvika pasi. Iyo hormone imwe yesterodi inoshanda zvikuru mumusika iyo inoshanda zvikuru mukucheka.
Iyo hormone inoshanda nekuvimbisa kuti muviri wemuviri mumuviri unoshandurwa zvakajeka kuva musimba. Imwe mukana wekushandisa e kutema ndeyekuti inovimbisa kuti muviri unochengetedza mitsipa yakaonda kuve kuti havazoperi panguva yekupisa mafuta.
Steroid inoita sechidziviriro chekuti izvi zvinoshanda zvakakwana sezvinobvira uye kuenzana kunowanikwa apo mafuta anopiswa semasumbu akaonda. Kana izvi zvikaitika, muviri unotanga kukura maitiro akaoma mazamu maitiro anowanzova kuda kweavo vanoita mukucheka.
Trenbolone acetate yekucheka
Sezvakanyorwa kare, zvose zvinonzi Trenbolone steroid zvinopa mhinduro yakafanana munguva refu. Mhedzisiro yakakura ndeye ester yakanyatsotaridzika iyo inotarisa kuti shoma reTrenbolone rinosunungurwa sei. Muchiremekedzo ichocho, Trenbolone acetate inoshanda seTrenbolone enanthate mukubudirira kwekubata. Zvisinei, zvinosimbisa kuti mushandisi anobudirira mitsva paanokurumidza kudarika kupfuura kana e inoshandiswa.
Imba yepamusoro inogadzirisa Trenbolone acetate inopa panguva yekucheka ndiyo kukwanisa kwayo kuzvisungirira kune androgen receptor molecule. Apo izvi zvinenge zvichiitika, nzira yekugadzirisa mafungiro inowedzera. Chigumisiro chacho chinowedzera uye mafuta akawanda ari kupiswa uye kutendeuka kuva maonda.
Pamusoro penzvimbo iyi, steroid anabolic yakashandiswa zvakanyanya kubatsira pakucheka panguva yekudya. Iyi inguva apo munhu anodya zvokudya zvakawanda uye anoritarisira kuti ichinjiridzwe kuva misumbu panzvimbo pemafuta. Zvisinei, zvinorehwa nevanabolic androgenic steroid panguva yakatarwa inoyeuchidza zvakare.
Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate for Bulking
Kukwezva ndeye nzira inotarirwa kupa muviri simba rinopfuura iro rinowanzove. Izvi zvinokurudzirwa nekukanda mamwe maoriyori mumutumbi wemuviri pane izvo zvinodiwa. Kana izvi zvikaitika, muviri unopindirana nekusikwa kwemasumbu nemafuta.
Kuchengetedza kuti mamwe masumbu kudarika mafuta anogadzirwa, muviri unoda kubatanidzwa mukunyatsoshandisa muviri uye steroid nemigumisiro yakakwana. Basa rinokurudzira vatambi vanoita kubvongodza kunyange kana vasina kukwikwidzana.
Izvi zvinonzi "off season" bulking. Inotarisirwa kukuvaka huwandu huzhinji hunoshandiswa apo nguva yekukwikwidza inouya.
Trenbolone steroids inoshanda pakubudirira kwekubvongodza nguva dzose dzegore. Vaya vanoshandisa zvipembenene panguva iyi uye vanozvibatanidza nekudzidzira zvakagadzirirwa kuti vabudirire miviri mikuru yakawanda iyo inoumbwa nemasumbu akawanda uye mashoma mashoma.
Trenbolone Enanthate nokuda kwekuvhara ropa inobatsira chaizvo kana iyo inokodzera kuyerwa inoshandiswa. Kubudirira kwe Tren e vs a for bulking inenge yakafanana. Misiyano inouya muzinga iyo steroid imwe neimwe inotora kuti itange kushanda.
Trenbolone acetate for bulking kazhinji ine nguva shoma. Izvi zvinoreva kuti iri nyore nyore kubudirira mushure mekudya, asi izvi zvinorevawo kuti kubudirira kwayo kunogara kwenguva pfupi. Kuti urambe uchibudirira muzvibereko zvakanaka, steroid inoda kushandiswa mushure mokupereta kwenguva pfupi.
Trenbolone enanthate, kune rumwe rutivi, ine nguva yakareba hafu yehupenyu kupfuura iyo. Mushonga unotora nguva kutanga kushanda, uye hausi kusiya muviri nyore nyore kana uchitanga kushanda. Mahomoni maviri, zvisinei, anounza migumisiro yakafanana munguva refu sezvo iwo ane tsananguro imwechete yeTrenbolone. Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Purogiramu, Zvigumisiro, Zvipo, Nhamba
Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate for Stacking
Muiti wezvivako anoshandisa steroids anoda kuvandudza zvikamu zvose zvemuviri wavo. Izvi zvinoreva kuti iye ari kushanda zvakaoma mukurovedza muviri kuti ave nechokwadi chokuti muviri unovaka kusimbiswa kutsungirira, kutsvaga kupora, nekuwedzera simba.
Paunenge uchishandisa pamwe nehafu pamwe chete, zvinoitika zvinodiwa hazvizoitiki sezvo steroids yakafanana. Izvi zvinoguma nekuwedzera migumisiro yechirango sekuda kuti mutambi wacho angatora kudarika.
Kubudirira kweTrenbolone steroids kunogona, kunyange zvakadaro, kunatsiridzirwa kana iko kushandiswa pamwe chete nedzimwe steroid. Steroid yakasarudzwa ye staking haifaniri kunge yakashata inopikisa chiito cheTrenbolone mubvunzo.
Trenbolone Enanthate nokuda kwekuvhara muviri inobatsira zvikuru kana ichibatanidzwa nemamwe steroid. Kushandisa Trenbolone acetate yekugadzirisa pamwe ne e e neParabolan hakukurudzirwe uye kunogona kutungamirira kune zvinouraya mhinduro.
Izvi zvikurukuru nokuti izvi zvitatu zvinonzi Trenbolone zvinenge zvakafanana zvakafanana. Tren e vs a for stacking ichapa mimwe migumisiro iyo inongowanikwa chete kuwedzera musimba masimba uye simba remuviri.
Zvisinei, muumbi wekuvaka anodikanwa kugadzirisa dzimwe nzvimbo dzisina kufukidzwa neava steroid. Kuti uwane kuzadzwa kwemigumisiro, muvaki wemuviri anofanira kufungidzira kushandisa Trenbolone steroid pamwe neAnadrol, Dianabol kana testosterone. Aya mamwe mahomoni anobatsira pakuvimbisa kuti enanthate uye acetate zvinoshandiswa zvakanyanya.
Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate Cycle
The e e vs a cycle yakanyatsofanana chete kuti imwe ye steroid inoshandiswa kushandiswa isati yakanyanya kunyanya kushandiswa nevashandi. Mukugadzirisa kurongeka kwakakodzera, zvakakosha kuisa miviri yemuviri maererano nehupenyu hwavo ne steroids.
Zvose Trenbolone enanthate maitiro anofanirwa kuve neine steroid yekunze iyo haisi yemhuri yeTrenbolone. Kushamiswa kwakakwana kunowanzova testosterone. Mhando yemhando ye testosterone iyo inoshandiswa haina basa kana yakareba zvakakwana iyo inopa zvakakwana kugamuchira muviri unoda.
Chikonzero chakaita kuti rimwe nerimwe rakatenderera rinofanira kuve ne testosterone ndechokuti kushandiswa kweTrenbolone kushandisa enanthate kunokonzera kuti muviri uite zvishoma nezvishoma kugadzirwa kweiyo hormone yepabonde. Izvi zvinoitika kune vakawanda vashandisi uye ichi ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuva nechokwadi chokuti hormone iripo pose paunenge uchishandisa Trenbolone enanthate.
Uyezve, kushandiswa kweTrenbolone enanthate pamwe neprogesterone kuchaita kuti vanabolic androgenic steroid inoshanda pasi pemamiriro ezvinhu akanaka.
Munguva yekufamba kwemwaka, zvinokurudzirwa kuti user kushandisa maitiro makuru e testosterone kuti awane zvikamu zvakanakisisa. Kubatsirwa kwekutengesa trenbolone enanthate ine dozi yakakura ye testosterone ndeyokuti muumbi wemiti achadzikisa mamiriro ezvinhu kuti iye anofanira kuvhara mushonga.
Neholo huru, majekiseni anogona kuitwa kamwechete pavhiki pane dzimwe nguva kana uchishandisa testosterone duku. Zvimwe pane testosterone, kushandiswa kwaAnadrol kana Dianabol kuchapa mhinduro imwe chete.
Nokudaro, muumbi wekufananidzira haafaniri kungozvipira kune testosterone. Kutsvaga kubudirira kwekusanganiswa nemamwe steroidsi inogona kuva nzira yakanaka yekugadzirisa pane zvakakunakira iwe.
Munguva yekucheka, Trenbolone enanthate cycle yakafanana neyo inoteverwa panguva yakatarwa. Muchikamu chino, mushumiri anogona kutora staking iyo nemamwe steroid akadai Masteron, Anavar, uye Winstrol.
Nguva yeTrenbolone enanthate ndeyepakati pe8 kusvika kumavhiki e16. Kuenderera mberi kunogona kutora nguva yakareba, kunyanya kune vashandisi vakagadziriswa. Munguva iyi, migumisiro yehomoni imwe nyanzvi ichatumidzwa. Munguva yemwaka wekufamba kwenguva, Trenbolone enanthate inogona kushandiswa kusati kwapera kana kana apedza nguva.
Trenbolone steroid inoda kuti ishandiswe kwenguva pfupi, uye kana bhesi yacho ikasunungurwa, muropa remvura, zvigumisiro zvinooneka. Kazhinji Trenbolone acetate vhizha inogadzira iyo kemikari mumatare anenge ane 100mg pam mg.
Vamwe vanotakura steroid mumaphaketeni e75mg / ml, asi izvi hazviwanzoitiki. Pamusoro pevanhu vasiri muviri, zvinokurudzirwa kushandisa acetate steroid panzvimbo yeananate. Izvi ndezvekuvimbisa kuti migumisiro yemigumisiro inobva mukushandiswa kwe steroid inogona kuderedzwa uye kugadziriswa nekukurumidza sezvinobvira. Nokuda kwekutanga, muyero we75mg kana kupfuura 100mg kwevhiki imwe chete.
Kurongeka kunofanirwa kutora mavhiki e8-16 sezvakaita Trenbolone enanthate steroid. Kune vashandi vemuviri vakagadziriswa vakashandisa steroid pane imwe nguva, muzana weiyo kusvika 500mg kwevhiki unogona kushandiswa. Izvi zvichave zvakadaro zvinenge zvichiendeswa nemigumisiro yakawanda kupfuura apo kana dhidiki inoshandiswa.
Trenbolone acetate kushandiswa kuchaita kuti muviri uve nezvinetso maererano ne libido. Ichi ndicho chikonzero zvakakosha kubatana nemishonga pamwe ne testosterone ine steroid yakafanana neProviron.
Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate Dosage
Tren e vs mutengo yakangofanana nemari yakawanda iyo inowanikwa kubva kune imwe nhamba yakafanana. Nokuti kutanga, zvinokurudzirwa, kutanga neTrenbolone acetate panzvimbo yemhando yeananthate.
Chikonzero chiri shure ichi ndechekuti acetate steroid inotora nguva shoma mumuviri wemushandisi. Nokudaro, kune anotanga uyo achiri kutora zvizere nekushandisa steroids, zviri nani kutanga nechisimba chiito Trenbolone acetate.
Izvi zvichaita kuti mutambi wacho aone kufanana kwechirwere nemuviri wake. Mushure mekuita zvakanaka kwekutanga Trenbolone acetate dose, mushumiri anogona kuunza Trenbolone enanthate iyo inogara kwenguva refu mumutambo.
Nhamba yekutanga yeTrenbolone acetate yemudzimai wei newbie inofanira kuva ye 50 kusvika 100mg. Ichi chiyero chakasimba chinogona kukonzera kupindura kunyanya kana imwe inokonzera kuTrenbolone.
Mushure mokunge zvave zvichisimbiswa kuti muyero uyu unopindirana, unogona kuwedzerwa kusvika kune 200mg neizvi zvinofanirwa kunge zvakagadziriswa nevhudzi vomuviri avo vakatora mishonga kwenguva yakareba. Kune Trenbolone enanthate, muyero wakafanana.
Paavhareji, mutambi anofanira kutora, 200mg kwevhiki. Zvisinei, izvi zvinofanira kunge zvakananga kune vanaroti vane ruzivo vakashandisa steroid kare.
Kune vamwe vanozoshandisa iyo yose 200mg muyero mune jiro rimwe. Vamwe vanosarudza kushandisa dheji imwe chete asi mune injenyo yakasiyana. Mujeri mumwe nomumwe ndeyezviitiko izvi zvinosanganisira 100mg yeTrenbolone enanthate mukati mevhiki imwe chete.
Nhamba yacho inogona kuwedzera sezvo nguva inofamba, asi izvi zvinofanira kuitwa nenzira yakarongeka. Izvi ndezvokuti kukwirira kwakanyanya kunotungamirira kumigumisiro inogona kuve yakakurumbira kana yakashandiswa zvakanyanya.
Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate Results
Izvo zvinokonzerwa neatetate uye enanthate hazvigoni kupfuurirwa. Nekushandisa kwakakodzera pamwe chete ne staking nemamwe supplement, Trenbolone steroids inogona kubudisa mutsara wezvibereko zvakanaka izvo zvisingagoneki kuburikidza ne weightlifting uye kudya kwega chete.
tren a tren e results zvinogona kunge zvakasiyana-siyana muhutano hwekukwana uye izvi zvinoratidzwa nezvimwe zvinhu zvakadai semasikirwo ekugadzirwa kwemunhu nevamwe. Zvisinei, mushandisi wese anovimbiswa yekukohwa zvakakura pamusoro pekuchera nekucheka.
Dambudziko rega nderokuti migumisiro yakanaka inogona kuvharwa nemigumisiro yemigumisiro kunyanya mumamiriro ezvinhu apo kuwedzerwa kwakanyanya kushandiswa.
Trenbolone Enanthate migumisiro
Trenbolone enanthate inozivikanwa kuti inobatsira zvikuru pakubatsira pakuzadza. Iyi hormone inobatsira nguva dzose uye ichi chinoita kuti ive steroid yakakurumbira nevakawanda vomuviri. Hapana steroid inopa migumisiro yakanakisisa yekubatsira kucheka panguva yakasara seTrenbolone enanthate.
Chinokosha pamusoro peSteroid iyi mukucheka ndiyo kukwanisa kwayo kubatsira kuumbwa kwemisungo yakaonda nenzira yakachena kudarika pane imwe steroid iripo. Izvo zvinoparadzanisa trenbolone enanthate zvakaparadzana ndiko kukwanisa kwayo kugadzirisa kusina mvura yekuchengetedza.
Zvimwe zvizhinji zvevanabolic steroid zvinokonzera kugadzirisa mvura uye izvi zvinopa muiti wekugadzirisa panjodzi yekudzivirira kuwedzerwa kweropa.
Zvakare, kusiyana nemamwe anabolic androgenic steroids, iyo hormone inoita kuti hutachiga hunovakwa uye hushoma kune mafuta asina kuumbwa. Izvi zvinogoneka kunyange panguva yemwaka, uye izvi zvinoita kuti iite imwe steroid inoshanda zvikuru mumusika nhasi.
Trenbolone Acetate migumisiro
Tren migumisiro inokurumidza kupfurikidza kune yee e, asi yakapfupika. Mushonga unobudirira chaizvo uye mukusimudzira kudzvora. Itero steroid inobatsira kune ani zvake anoda kuwedzera misumbu uye kutema mafuta.
Maviri ane mafuta anowanzotyisa uye haana kukodzera kumitambo. Sekudya kumwe, zvakasikwa kuti muviri uumbe mafuta. Zvisinei, kushandiswa kweTrenbolone acetate kunogona kuvimbisa kuti izvi zvinodziviswa uye panzvimbo pacho zvinosvibisa misumbu zvinoumbwa.
Trenbolone Enanthate Side Effects vs Trenbolone Acetate Side Effects
The the vs vs the effects vanonyanyoziva kana steroid inoshandiswa mumari yakawanda. Izvi zvinoreva kuti hazvisi nguva dzose kuti vanhu vawane zvinetso izvi sezvo vachisiyana kubva kune mumwe mudzidzi kuenda kune imwe.
Kuva androgenic anabolic steroids, zvose Trenbolone enanthate uye Trenbolone acetate zvinoratidza migumisiro yakajairika nedzimwe mishonga mukirasi. Zvisinei, chinhu chakanaka pamusoro peTrenbolone ndechekuti migumisiro yakawanda inowanzoenderana nekushandiswa kwe-steroid inogadziriswa.
Kuti unzwisise zvakakwana mamiriro ehu e vs a, zvakakosha kuidzidza pasi pezvikamu zvakakura izvo zvavanopinda mazviri. Izvi zvinotevera zvimwe zvinotevera zvinoshandiswa zvinoshandiswa nemunhu zvinotevera kushandiswa kweTrenbolone steroids:
ITrenbolone steroid haiti mishonga inonhuhwirira pakunaya kwavo mumuviri. Izvi zvinoreva kuti hapana kusunungurwa kwemvura muitiro. Iro hormone Trenbolone inogona, kunyange zvakadaro, inofungidzirwa kuti inokonzera isrogenic effect sezvo inowanzoonesa progesin zvinhu.
Ichi chikonzero chinozivikanwa che gynecomastia. Ukana hwechiitiko ichi hunoitika hunowedzera nekushandiswa kweTrenbolone hormone pamwe ne progesterone hormone. Ichi chiitiko chinogona kushandiswa nekushandiswa kwe-anti-estrogen hormone inovimbisa kuti mikana yegynecomastia inoderedzwa kana kubviswa zvachose.
Izvi zviripo kune vashomanana vane hypersensitivity kune steroid. Nokudaro, inofanira kuva nharo yekusanyanya kunetseka sezvo vavaki vakawanda vasingakwanisi kukudziridza.
Trenbolone steroid are androgenic. Izvi zvinoreva kuti kune mukana wekuvandudza uyerogenic kubva pamigumisiro yechirwere iyo inowanzobatwa nemamwe steroid ekirasi. Chimwe chezvinhu zvakajeka uyerogenic migumisiro ndeyekugadzirwa kwemvere dzemaziso.
Varume vane mhazha mumagenhi avo vanogonawo kuve nemamiriro ezvinhu mushure mekushandisa Trenbolone acetate kana rudzi rweanthate. Uyezve, zvinokwanisika kuona ruzivo rwemakwenzi pane chiso nebhokisi. Zvakare, rutivi urwu runonyanya kunyanya kunobva mazita emunhu.
Vanhu vazhinji vanoedza kushandisa zvakasiyana-siyana inhibitor kudzivisa kusimbiswa kweizvi uyerogenic madhara. Zvisinei, izvi zvakagadzirwa kuti zvive zvisina maturo sezvo Trenbolone isingatauri kune reductase inhibitor. Pane kudaro, nzira yakanakisisa yekugadzirisa iyi ndeyekutarisa kuyerwa kuri kuitwa.
c) Mwoyo mishonga.
Kunyange zvazvo matambudziko anokonzerwa ne gynecomastia anoonekwa sechinetso, haasi chinhu kana ichienzaniswa nemaronda ane chirwere chepfungwa chinogona kuguma nekushandiswa kweTrenbolone steroids.
Iko kushandiswa kwehomoni kunogona kutungamirira pakuderera mumakirwe echolesterol inobatsira uye kunobatsira kuvaka-up yeLDL cholesterol inonzi inokuvadza. Dambudziko iri rave rakanyatsogadziriswa nevarimi vemiti vachishandisa Trenbolone, uye hapana mhinduro inozivikanwa nayo kunze kwekudya kwakakodzera.
Izvi zvinoreva kuti kudya omega mafuta acids kudya panzvimbo yekuti isina chinhu chichava danho guru pakuwana muviri unoda asi panguva imwechete kuchengeta cholesterol mazinga mukutarisa. Izvi zvinofanira kuitika kunyange panguva yezvakaipa.
Avo vanokurudzira zvakakosha zvekushusha kweklesterol vanofanira kurega kushandisa mahomoni eTrenbolone pakarepo. Kushandiswa kwemasmoni kunobatanidzawo nekuvandudzwa kwesimba reropa.
Izvi ndezvokuti kunyange Trenbolone isingasimudzi mvura yekuchengetedza. Nokudaro, zvakakosha kuchengetedza izvi sezvamunoita muviri wako wekuita muviri.
Kushandiswa kweTrenbolone hormone kuchave nekukwanisa kukuru pamatanda e testosterone. Izvi zvinoitika sezvinopinda muhomoni mukati memaropa inodonhedzwa se testosterone yakawedzerwa.
Muviri unopindira nekudzivisa kukonzerwa kwe testosterone, uye izvi zvinokonzera mahomoni ehomoni kuti aende pasi. Chigumisiro chepastosterone chakanyanya chinowanzobatana nepabonde.
Mumwe munhu ane uwandu hwehutachiona huchatanga kutarisana ne-libido shoma uye erectile kudzvinyirira mune varume. Izvi zvinowanzogadziriswa nekuvimbisa kuti iwe unoshandisa hormone pamwe ne testosterone yakajeka. Nenzira iyi, mazinga ehomoni iyi acharamba akachengetwa pamatunhu anodiwa.
Chinhu chakanaka pakushandisa mahomoni eTrenbolone ndechokuti kubudiswa kunotanga zvakare mushure mekugadzirwa kwehomoni inosungirwa. Zvinogona kutora nguva yakati isati yasvika pakugadzirwa kwezvinhu zvinowanzosangana neTrenbolone enanthate iyo inogara kwenguva yakareba mumutambo kupfuura Trenbolone acetate.
Nokuda kweizvi nzira yekugara yakagadzirwa kukurumidza kudzokera kune tsika, zvinokurudzirwa kuedza Post Cycle Therapy (PCT). Izvi zvingave zvakanakisisa zvakaputirwa panguva yezvakaipa. Ichi chirapa chichaita kuti nguva yekudzoka kubva kushandiswa kwehomoni inowanikwa kuderedzwa.
Chinhu chakanaka pamusoro pekushandiswa kwehomoni iyi ndechokuti hapana ngozi yekudzikisa matambudziko ehutachiona mushure mekushandiswa. Mukana wekuti izvi zviitike ndeye apo muumbi wemiti akashandisa mukana mukuru kwazvo weTrenbolone. Izvi kazhinji hazvibviri sezvinoitwa nehope duku yakakwana kuti ipe migumisiro inodikanwa.
Kune dzimwe mimwe migumisiro yekushandisa Trenbolone steroids asi ane ruzivo rwakafanana nemhinduro yemumwe munhu kuwedzera. Mienzaniso yemigumisiro yemigumisiro iyi inosanganisira kushaya njodzi, kutuka usiku uye kuwedzera kwemwoyo.
Chinhu chakanaka pamusoro pemigumisiro yemigumisiro iyi ndeyokuti haisi kuitika pamadhora uye ichi zvinogona kuvharwa nekugadzirisa denderedzwa kuti uwane maitiro emadhora mashoma. Kana zvipingamupinyi zvinopfuurira kunyange mushure mokutora ichi chiyero, munhu wacho anofanira kurega kushandisa hormone.
Izvi zvinofanira kutarisirwa muzviitiko zvisingawanzoitiki. Izvo zvakadaro zvakakosha kuchenjerera nguva dzose kana uchishandisa steroids. Chero rutivi rwunopinda rutivi rwakaratidzwa runofanira kuva chikonzero chakanaka chekumutsa alarm kumunhu.
Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate Reviews
Vanhu vazhinji vanobva kumativi akasiyana-siyana enyika avo vakashandisa maitiro maviri eTrenbolone vakapa mazano akanaka pamusoro pekubudirira kwavo. Vamwe vavo vakanga vari vatangaridzi vakanga vane kurota kwekuwana miviri yakakwana yakanga yakaumbwa nemisungo panzvimbo yemafuta panguva yavakanga vari kuongorora.
Zvisinei, pasinei nokuti iri nguva yavo yokutanga, vakashamiswa nekuchinja kwavakanga vaita mushure mekushandisa Trenbolone. Vamwe vaongorori vakaramba vachishandisa Trenbolone, uye yakavapa zvose zvinodiwa mukuchengetedza muviri wakasimba uye wakavakwa zvakanaka. Zvakare kune avo, steroid haigoni kushandiswa mumabasa avo ekugadzira muviri.
Trenbolone Enanthate mhinduro
Jackson Carter: Jackson Carter ndeye 26-year-old weightlifter uyo anoita gym in Chicago, Illinois. Akakwanisa kukurira nhema dzinowanikwa kushandiswa kwevanabolic androgenic steroids. "Ndave ndichiita weightlifting kubvira ndichiri muduku uye ndakava neruchiva rwaro kuburikidza nemakore kusvikira ndakasarudza kutanga nzvimbo yangu. Mumakore ekutanga, ndakatarisa pane zvakawanda zvekunyora muviri pasina kushandisa chero steroid.
Ndakanga ndisati ndambofunga nezvekuedza kushandisa chero upi zvake kunyange zvazvo ndaiziva kuti vamwe vanhu vakanga vachivashandisa. Ndaigara ndichitya kutambura nemigumisiro yemasikirwo sezvakawanda nyaya dzakaudzwa kumativi ose emusha wangu.
Zvisinei, mumwe munhu akauya zuva rimwe chete kumitambo yangu yekurovedza, uye mushure mokunge apfuura nepakati pemitambo, akandibvunza kana ndaiziva kuti ndingatora sei Trenbolone enanthate. Ndakanga ndisati ndanzwa nezvechinhu chakadaro ndokuudza murume uyu kuti hatina kutengesa steroids. Zvisinei, ndakatanga kuve nekuda kuziva pamusoro pezvaakanga achikumbira pamusoro uye ndokufunga kuzvipa. Mushure mekutsvakurudza kwakawanda, ndakatanga nemhando yekuti asi chinangwa changu chikuru ndechokuti tishandise iyo yandakange ndanzwa mutengi achikumbira. Mushure mechinguva, ndakatanga kushandisa e, uye handina kutarisa shure kubva ipapo. Ndakakunda zvikuru mumwedzi isingapfuuri mitanhatu uye ndakawana kutarisa kwandakanga ndava kuda kwemakore iwayo ose. Nhasi ndinokurudzira vanhu kuti vashandise e e vasingatyi nekutya sezvo ini ndinogona kupupura pamusoro pekubudirira kwayo. Ini ndinonzwa kunetseka pamusoro pemigumisiro yemigumisiro kunokonzerwa nehuwandu sezvo ini ndisina kumbobvira ndave nechinhu chipi zvacho chandinogona kufunga chakakomba ". Jackson anoti haazombozeze kutaurira e evatengi vake.
Rajit Prajesh kubva kuPakistan: Rajit Prajesh ane zvakawanda zvekutaura nezveTrenbolone enanthate. "Ndakashandisa steroid yekubvuta uye pakutanga zvinhu zvakafamba zvakanaka. Zvadaro ndichiri pamakwikwi angu, ndakaona kuti zvepabonde rangu raifambiswa. Ndakanga ndiri kushandisa e, uye ndakanga ndisingazivi kuti zvinogona kundikanganisa nenzira iyoyo. Zvakanaka, ndakagadzirisa chinetso kuburikidza nekumira majojo angu uye kuisa testosterone mumagariro angu, uye zvose zvakadzokera kune zvakajairika. Iye zvino ndinogona kuzvikudza nokuzvikudza kuti ndine muviri wandinoda kwemakore.
Amit Patel Mehta: Amit Patel Mehta mutyairi webhokisi kubva kuCalcutta, India uyo ari kushandisa uye haagoni kubatsira asi kurumbidza kukosha kwaro mukumubatsira kuti arambe akaenzana. "Muchikwereti, iwe unoda kuva nemuviri wakasimba sezvo izvi zvinobatsira mukuvimbisa kuti une simba rakakosha. Ndave ndiri mukoro webhokisi kwemakore manomwe ikozvino, uye ndakapedza nguva yakawanda yenguva yangu ndichitsvaga nzira dzakanakisisa dzokuwana muviri wakasimba. Yakanga iri kuburikidza nekudzidza kwandakawana Trenbolone acetate uye yakashamiswa nemigumisiro yayo. Ndakanga ndisingadi kuisa mumwe wevadzidzi vangu mumatambudziko nevane masimba, saka ndakasarudza kuzviedza ini ndoga. Mushure mekushandisa Trenbolone acetate kwemwedzi mitatu, ndakashamisika kuti hapana mumwe wevadzidzi vangu aigona kundigumbusa. Iniwo ndakakurumidza kuputika, asi zvinonzwisisika kuti kuwedzera kwemisumbu hakuna kumbokanganisa simba rangu. Ndakagadzirisa kushandisa Trenbolone kuti ndirambe ndakagadzikana uye ndinonakidzwa pane zvingaita. Ndangoshuva kuti mishonga iyi yakanyorerwa pamutemo kuti ishandiswe nebhokisi ". Mutungamiri Patel akawedzera kuti anofarira zvidzidzo zvekurovedza kupfuura kare mushure mekunge apinza Trenbolone acetate muitiro wake wekureruka.
Joshua Muthelekezi: Joshua ichine jaya kubva kuDurban, South Africa uyo akawana zvakare mushure mekushandisa Trenbolone acetate. "Ndaive ndichiyemura vashandi vemamwe mativi enyika uye ndakafunga kuti pane chimwe chinhu chakawedzera muviri wavo, kusiyana nevakawanda vekuSouth Africa vanoita gym. Rimwe zuva, sezvo ndanga ndichitaura neshamwari, anonzi Peter Nwoko kubva kuGhana paIndaneti, ndakamuudza kuti ndaiita weightlifting sekuita basa. Akakumbira mifananidzo yandakatumira.
Sean akataura kuti ini ndichiri kuvandudza kutarisa kwangu nekushandisa Trenbolone acetate. Handina kuongorora zvakanyanya pamusoro payo, asi pakarepo ndakatanga kutsvaga steroid iyi. Mushure mekunge mwedzi, ndakautenga kubva kuGoli uye ndakatanga maitiro angu pasina kuparadza nguva. Pashure penguva yakati zvinhu zvakatanga kuchinja pamuviri wangu. Ndakatowedzera mishonga yakawandisa zvokuti ndaisagona kumbofunga kurarama pasina steroid zvakare ".
Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate -Summary
Trenbolone enanthate uye Trenbolone acetate ndiyo mbiri yeanowanzoshandiswa anabolic androgenic steroids. Kunyange zvazvo Trenbolone acetate yakagadzirirwa kushandiswa mumhuka, ikozvino yakashandiswa nevatambi vanosimudzira-kubatsira kuti vabatsirwe uye kubvisa mafuta mukati memwaka.
Trenbolone enanthate, kune rumwe rutivi, haisi mvumo munyika dzakawanda uye naizvozvo haisi kuwanikwa pachena kubva kumakemikari. Zvisinei, steroid ichiri kushandiswa zvikuru nevatambi.
Iviri yeTrenbolone steroid inopa chiitiko chimwe chete uye inoshandiswa mumatambudziko akaenzana. Zvisinei, musiyano unouya nenguva iyo inotorwa kuitira kusunungurwa kwebasa reTrenbolone rakasimba. Trenbolone enanthate ine nguva yakareba hafu yeupenyu kupfuura Trenbolone acetate.
Izvi zvinoreva kuti kana yakakonzerwa Trenbolone acetate inobatsira pamhanho inokurumidza kupfuura Trenbolone enanthate. Rudzi rweinanthate runogarawo muhurongwa kwenguva refu kupfuura acetate steroid. Izvi zvinoda kuti munhu aite mamwe maitiro ekushandisa kurapa kuti adzinge izvo zvakasara mumuviri mushure mekushandisa.
Mushandisi mutsva anokurudzirwa kutanga nekushandisa Trenbolone acetate uye apedza kudzidza kuTrenbolone enanthate. Izvi ndezvekuvimbisa kuti chero mimwe migumisiro inoshandiswa pakarepo. Itero steroid dzine zvimwe zvakafanana.
Zvimwe zvezvinhu zvakajeka zvinosanganisira kuderera mukugadzirwa kwe testosterone hormone nemuviri. Izvi zvinokundwa nekubatanidza testosterone mumhepo.
Imwe dambudziko nderokuparadzwa kwecholesterol yakanaka pamwe chete nekugadzirwa kwebioripolisi yakaipa. Izvi zvinogadziriswa nekuongorora nezvekudya kwevanhu. Kusiyana nemamwe akawanda steroids, Trenbolone enanthate uye acetate haisi kukurudzira mvura kuchengetedza. Izvi zvinoita kuti zvive zvakachengeteka kubva pakusimudzira kukwirira kweropa. Zvisinei, vashandisi vane huwandu hwehutano hwemhepo inorayirwa kuti varege kushandisa steroid.
Unogona kuvimba buyaas.com nokuda kwekutengesa kwekutengesa kwekutenga kwekutenga kwechokwadi uye kusingakwanisi Trenbolone Enanthate uye Trenbolone Acetate.
Trenbolone Enanthate vs Trenbolone Acetate Bibliographies
Fink, J., Schoenfeld, BJ, & Nakazato, K. (2018). Basa remahomoni mumusana wehutachiona. The Physician and sportsmedicine, 46(1), 129-134.
Yarrow, Joshua F., et al. "17β-Hydroxyestra-4, 9, 11-trien-3-one (trenbolone) inoratidzira maitiro anokonzera vanabolic activity: zvinokonzerwa nemasisita, bone, adiposity, hemoglobin, uye prostate." American Journal of Physiology-Endocrinology uye Metabolism 300.4 (2011): E650-E660.
Dalbo, VJ, et al. "Testosterone uye trenbolone enanthate inowedzera myostatin yakakura yemaprotheni kutaura pasinei nekuwedzera skeletal muscle hypertrophy uye satellite sendima nhamba mumuseve wemakumbo." Andrology 49.3 (2017): e12622.
Graham, Michael R., et al. "Kukonzera hutano mukushanda-uye mifananidzo yekuvandudza zvinodhaka." Kuongorora Zvinodhaka uye Kuongorora 1.3 (2009): 135-142.
Kraus, Sophie L., et al. "Rutivi rwenyama rwekunaka: acne fulminans inokonzerwa nevanabolic steroid munhengo yemurume." Archives of dermatology 148.10 (2012): 1210-1212.
Fink, Julius, Brad Jon Schoenfeld, uye Koichi Nakazato. "Basa rehomoni muhutano hwehutachiona." The Physician and sportsmedicine 46.1 (2018): 129-134.
Kana uchida, kana uchida kuziva, poderi inoshandisa email yega inos nosso endereço: [Email akadzivirira]? Nossas vendas irão lhe responder semashoko ekutaurirana.
Como comprar a trembo ace de vcs?